यहाँ म मत्ती मा एक जोडी महिना पहिले प्रचार एक प्रवचन छ 12:36. म यो तपाईं एउटा प्रोत्साहन छ प्रार्थना.
शब्द महत्त्वपूर्ण छन्. हामी शब्दहरू हाम्रो मित्र र परिवारका साथ संवाद प्रयोग. हामी व्यापार सञ्चालन गर्न हाम्रो शब्दहरू प्रयोग. म गीतहरू सँगै राख्न र जीवित बनाउन शब्दहरू प्रयोग. We use words...
मेरो पुस्तकको विमोचन को उत्सव मा, असल जीवन, यहाँ "एक सोह्र लागि आधिकारिक भिडियो,” मेरो नवीनतम एल्बम बाट, पनि असल जीवन भनिन्छ.
यहाँ म यर्मिया मा प्रचार एक हाल प्रवचन छ 31:33. मेरो मुख्य बुँदाहरू थिए: म. भगवान अन्तर्राष्ट्रीय काम गरिरहेको छ द्वितीय. भगवान कार्य आंतरिक III छ. भगवान कार्य Interpersonally चतुर्थ छ. परमेश्वरको काममा छ
म जीवित लागि संगीत गर्न. र तपाईं को रूप मा धेरै पनि थाहा, the kind of music I do isalittle bit different than the songs you might hear ataCHBC...